I-South Seas: umsebenzi ogqithise udidi lwabacuphi | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | 09/04/2022 17:02 | Ababhali, Iincwadi, Inoveli emnyama
Isicatshulwa sikaManuel Vázquez Montalban
ISpeyin yamashumi asixhenxe yimeko ekhethwe ngumbhali ukubonisa yonke into enokuthi ibe semva kolwaphulo-mthetho olungaqondakaliyo. Nangona kufuneka kuqatshelwe ukuba inoveli ulwandle lwasezantsi; ngumbhali waseCatalan uManuel Vásquez Montalbán, udlula uhlobo lwamapolisa. Oku mhlawumbi lolona ludumileyo nolufundeka ngokubanzi kuthotho lwabacuphi bombhali.
nayo, le ncwadi yapapashwa ngo-1979 yayikuluhlu lweenoveli ezilikhulu zenkulungwane yamashumi amabini ka El Mundo. Ayililize, umfundi ufumana ibali elinobuchule elicwangciswe kwiyelenqe lamapolisa lempumelelo egqibeleleyo kwaye yakhelwe malunga nomlinganiswa oyintsomi: umcuphi uPepe Carvalho. Oko kukuthi, sisicatshulwa esinazo zonke iinkalo zopapasho oluthengiswa kakhulu.
1 Isishwankathelo soLwandle lwaseMazantsi
2.1 Ukugqithisela kunye nelifa
3 Malunga nombhali: UManuel Vázquez Montalban
3.1 Umdali ochubekileyo kwaye okhethekileyo ngokwenene
3.2 Ngasekupheleni kobomi
Isishwankathelo se Iilwandle ezisemazantsi
Imbonakalo yomntu ofileyo kwisakhiwo esisakhiwa eBarcelona ixhokonxa uphando lwabucala ukufumana oonobangela. Lo mntu ubhubhileyo yayingusomashishini, uStuart Pedrell, ekumele ukuba wathabatha uhambo lokunqumla iiLwandle eziMazantsi kunyaka ongaphambili. Nangona kunjalo, umzimba ofunyenwe kwintendelezo yomsebenzi ubonisa enye into, inqaku: "akukho mntu uya kundithatha ngasezantsi."
Ngesi sizathu, umhlolokazi nguPedrell isigqibo sokuqesha iinkonzo zomcuphi wabucala uPepe Carvalho. Ngale ndlela, into engenakucingelwa iqala ukufunyanwa kunye nenkangeleko yeempawu ezahlukeneyo kunye nezintsonkothileyo. Ekugqibeleni, umphandi ufumanisa ukuba usomashishini obuleweyo wayelitshintshile igama lakhe Ngaphambi kokuhlala kwindawo esecaleni yemetropolis yaseCatalan.
U-Pepe Carvalho ufumana amava amangalisayo ngelixa ezama ukusombulula ukubulala. Kamva, Umcuphi ufumanisa ukuba uPedrell uthathe isigqibo sokuyishiya indlela yakhe yokuphila sosomashishini ophumeleleyo ukuya engaziwa. Esinye isityhilelo esibalulekileyo nesibophelelayo ngokuhlatywa kukasomashishini kukukhulelwa kwenkosikazi yakhe.
Indawo yangasemva ibonelelwa likomkhulu laseCatalonia ngexesha likaFranco. Ngelixa eliphambili, uCarvalho udiza ukuba umntu obhubhileyo eneneni wayengusomashishini onxulumana nabantu abanobuqhophololo. yobuzwilakhe. Ngale ndlela, kuboniswa ibutho labantu elonakaliswe ngamandla obuzwilakhe; imeko apho uPedrell kunye namaqabane akhe bazizuzela ngokungekho mthethweni.
Iilwandle ezisemazantsi - njengawo wonke umsebenzi wombhali waseCatalan- ihlolisisa iziganeko zembali ezibuhlungu ezenzeka eSpeyin phakathi kwinkulungwane yama-XNUMX. Uphononongo oluthe lwadlulayo lusondela kwimbono ebaluleke kakhulu kunye nengqongqo ngegama. Ngokufanayo, ngexesha lokupapashwa kwenoveli yayilixesha elithambileyo eSpain, kwinguqu epheleleyo kwidemokhrasi.
Loo meko ifumanisa ilizwe lase-Iberia liphakathi kwengxaki enkulu yezentlalo nezoqoqosho. Ngokuhambelana, kwakukho intelekelelo eninzi (ingakumbi ngexabiso lezinto zokwakha) nobuqhophololo. Konke oku kubonakaliswe kwiBarcelona ephawulwe yi-stratification yentlalo eyingozi nangenxa yokungaqiniseki okukhoyo.
Ukugqithisela kunye nelifa
Iilwandle ezisemazantsi Yayiyinoveli yesine epapashwe nguVázquez Montalbán obambeleyo yayingumcuphi uPepe Carvalho. Kungekudala emva kokuqaliswa, esi sihloko sanconywa ngabahlalutyi boncwadi baseSpain nabaseYurophu njengomzekelo obalaseleyo wokubalisa amabali. Ngenxa yesi sizathu, kuthathwa njengowona msebenzi udumileyo wombhali owazalelwa eBarcelona (enyanisweni, waphumelela ibhaso lePlaneta).
Olu xabiso luhlobo lwesivakalisi esingacimiyo, ekubeni sisasebenza de kube namhlanje. Ngendlela enye, impembelelo yesimilo somcuphi u-Pepe Carvalho uye waba nefuthe lamazwe ngamazwe (kwaye yomelele). Oku kuboniswa yile datha ilandelayo:
Kwi 1992, Iilwandle ezisemazantsi yahlengahlengiswa kwiscreen esikhulu phantsi kolawulo lukaManuel Esteban kwaye ibonise abadlali abakhokelwa nguJuan Luis Galiardo, uJean-Pierre Aumont noSilvia Tortosa, phakathi kwabanye.
Ukususela ngo-2006, iBhunga lesiXeko saseBarcelona linikezele ngembasa yePepe Carvalho kubabhali besizwe nabangaphandle abanendlela ephawulekayo kuhlobo lwe inoveli emnyama okanye yamapolisa
Umbhali uAndrea Camilleri waphefumlelwa yi Umcuphi uCarvalho xa wayedala isimilo sakhe somkomishinala uSalvo Montalbano (ukwenziwa kweTaliyane yefani yombhali waseBarcelona). Nangaphakathi kwamabali kaCamilleri, uMontalbano uchazwa njengomlandeli othembekileyo weenoveli zamapolisa zikaVázquez Montalbán.
Malunga nombhali: UManuel Vázquez Montalban
Umyili we Iilwandle ezisemazantsi wayengumbhali, imbongi, umbhali, umgxeki kunye negastronome, owazalwa ngoJuni 14, 1939 eBarcelona, ​​​​eSpain. Wayekuphela komntwana, wadibana noyise, owayesentolongweni, xa wayeneminyaka emihlanu ubudala. Kamva, wafunda iFilosofi kunye neeLeta kwiYunivesithi yaseBarcelona. Apho wadibana noAnna Sallés, awatshata naye ngowe-1961.
Emva kwexesha lakhe laseyunivesithi, uVázquez Montalbán uchithe ixesha elininzi lobomi bakhe ekubandakanyekeni kwezopolitiko nakubuchule bobuntatheli. Wade walwa kwimibutho emininzi yezopolitiko enotyekelo oluchasene noFranco. Esi sikhundla esichasene nolawulo sabonakaliswa nakwimisebenzi yakhe yobuntatheli. Ngenxa yoko, wavalelwa entolongweni waza wahlala elibanjwa ixesha elingaphezu konyaka.
Umdali ochubekileyo kwaye okhethekileyo ngokwenene
UManuel Vázquez Montalbán wayeyindoda eyayikwazi ukugcina ulungelelwano phakathi korhwebo olwahlukileyo. Nangona kwasekuqaleni wayezijul’ ijacu kwezopolitiko nobuntatheli, kamva wasebenzisa ubizo lwakhe loncwadi de kwaba yimihla yakhe yokugqibela.. Ukongeza, wayeyigastronome, imbongi, umbhali wentshayelelo kwaye esaziwa ngokubanzi ngokuba ngumgxeki obukhali.
Umbhali weBarcelona uzuze indawo kwimbali yamva nje yoncwadi lwaseSpain njengombalisi omkhulu wolwaphulo-mthetho okanye iinoveli zabacuphi. Uninzi lolu qwalaselo lubangelwa ikakhulu kuthotho lweCarvalho. Nangona kunjalo, kukufutshane kakhulu ukuchaza ukuveliswa koncwadi oluchubekileyo lombhali waseCatalan kuphela malunga nomcuphi okhankanywe ngasentla.
Lilonke phantsi kotyikityo lukaVázquez Montalbán kukho ishumi elinesithathu ingqokelela yemibongo, iinoveli ezingamashumi amathathu anesine, amabali amafutshane alishumi elinambini kunye nezincoko ezingaphezu kwamashumi amathandathu.. Ukongeza, wayengumbhali-mbhali weencwadi ezininzi kwaye wapapasha izicatshulwa ezininzi ezibandakanya ii-anthologies, imidlalo kunye nemidlalo yerediyo. Eso santya sichukumisayo sokudala sanqunyulwa kukufa ngequbuliso (ukuhlaselwa yintliziyo), okwenzeka eBangkok ngo-Oktobha 18, 2003.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Iilwandle ezisemazantsi
UStefan Zweig: iincwadi
Afrika Vazquez Beltran. Udliwano-ndlebe nombhali wencwadi ethi The Silence yaseBerlin